Miniclip inodzokera kukakavara neHockey Stars, isu tinokuratidza | IPhone nhau
Miniclip imwe yeaya "madiki" makambani ekuvandudza mutambo anoenda kubudirira mushure mekubudirira, vazhinji venyu muchaziva zvimwe zvikamu zveiyo franchise yakafanana neAgar.io, 8 Ball Pool uyezve Soccer Stars. Zvakareruka, mitambo yevatambi vakawanda uye zvechokwadi muropa. Ichokwadi ndechekuti dingindira uye mashandiro emazhinji emitambo yacho akakosha, asi pamwe ndiyo kiyi yekubudirira kwayo, mitambo inokwezva marudzi ese evateereri, nekuti kutamba kuri nyore chaizvo, chinhu chakaoma kuchengetedza mwero pa nguva imwecheteyo urefu. Ivo vachangobva kuvhura Hockey Nyeredzi, musi wa18, dhirivhari yakafanana neSoccer Stars, asi zviri pachena zvichibva paHockey.
Hatina mubvunzo nezvemaawa ekunakidzwa uye chit-chat neshamwari kuti mutambo uyu uchatikonzera, sezvinoita Soccer Stars kana Agar.io. Iyo hockey theme inoipa iyo yekuwedzera, kunyange ichitendeseka, ndizvo izvoZvichida zvakafanana zvakafanana mune dingindira uye skrini kune mukoma wake mukuru Soccer Stars. Aya ndiwo maratidziro anoita Miniclip:
Iyo yakanakisa yevatambi vevazhinji hockey mutambo we nhare, kubva kune ivo vavaki veimwe huru mitambo yemitambo ye mobile online!
Rova chando kuti uve HOCKEY STARS ngano! Tora pasi rese mushe-on-one mitambo yevatambi vakawanda: tora mapfuti ako akananga kuchinangwa kana kushandisa chinangwa kudzora uye nemazvo kusvika kumashure kwemambure!
Tamba munzvimbo dzakasiyana kuti uwane mibairo iri nani! Kuhwina makwikwi uye kuvhura matani ezvikwata zvine masimba akasarudzika uye masitaera. Pinda iyo ice rink uye utambe Hockey Nyeredzi!
CHakanakisisa, CHETE CHETE: IMWE kurwisa NYIKA! Tamba mitambo inomhanya-mhanya uye uvandudze chinzvimbo chechikwata chako pamabhodhi epamberi epasi rose emubairo mukuru!
KWikwidzana NESHAMWARI DZAKO: Panogona chete kuva mambo mumwe wedare! Denha shamwari dzako uye uvaratidze kuti iyo chaiyo REAL hockey nyeredzi ndiani!
Matani EQUIPMENT YOKUSUNUNGURA: Mirira nyika yako kana sarudza kubva kwakasiyana siyana zvikwata, rimwe nerimwe riine masimba akasarudzika uye dhizaini. Sarudza chaunofarira!
Zviri pachena kuti zvichatipa maawa mazhinji ekunakidzwa. Mutambo wakasununguka zvachose, nekutenga kwakabatana kuti hongu. Iyo yekutanga vhezheni inobata chete 45.5 MB Mukurangarira kwedu, kunoenderana nechero chishandiso kubva kuIOS 6, Miniclip inogara ichida kuti munhu wese akwanise kutamba, uye pamusoro pezvose, application yepasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Miniclip inodzokera kukakavara neHockey Stars, isu tinokuratidza
Services, inowedzera kukosha sosi yemari yeApple